Ndị a niile bụ ekwentị, ruo ugbu a, nke ga-enweta Android Q | Gam akporosis
Ndị a niile bụ ekwentị, ruo ugbu a, nke ga-enweta gam akporo Q
Google egosiputa ihe omuma karie ma choo ya na sistemụ arụmọrụ maka smartphones, nke bụ android. Companylọ ọrụ ahụ, kemgbe mmalite nke OS a, agbakwunyela ihe eji megharịa ọnụ ma ọ bụ aha dị ụtọ na ụdị nke ọ bụla. Achịcha, Oreo, Nougat, Marshmallow na ndị ọzọ bụ ndị ikpeazụ nụrụ banyere ya, ebe ọ bụ na ha so na ọdịiche kachasị ọhụrụ. Ọ bụ ezie na anyị amarala ahụ na, karịa nke ahụ, anyị na-echere ma ọ bụ na-eche, kama nke ahụ, na-anụ ọkụ n'obi ịmara ihe ga-abụ nri ụtọ ọzọ nke ga-amata ụdị nke iri nke sistemụ arụmọrụ, na echiche anyị niile agbafuola.
Dị ka anyị kwuru na nso nso a, Android Q (10) agaghị ahọrọ ịgbaso omenala. Agbanyeghị, nke a bụ ihe anyị na - ekwesịghị ichegbu onwe anyị, ọ baghị uru, ikwu eziokwu. Kama nke ahụ, ihe anyị kwesịrị ịma bụ akụkọ ikpeazụ ọ ga-egosi, yanakwa ngwaọrụ ndị ga-enweta ya, nke abụọ bụ ihe anyị lekwasịrị anya ugbu a n'ihi anyị depụtara ụdị niile nke ụdị dị iche iche nke ga-anata ya n'oge na-adịghị anya.
Gam akporo Q adị maka ọtụtụ smartphones kemgbe ya beta tester mmemme na oru. Kemgbe ahụ, enweela ọtụtụ ndị ọrụ kpebiri ị nweta OS a, ọ bụ ezie na enweghị ike ịnụ ụtọ uru ya niile n'ihi na ọ bụ na nyocha ya.
A gam akporo achịcha, OS kachasị maka Google smartphones emere na afọ gara aga
Ọtụtụ ndị na-emepụta ama ama na-eme ọkwa banyere ọdụ ha na gam akporo Q, na-ahapụ ka ọha na eze mara nke ga-mobiles ga-enweta ya na mbụ, dị ka Nokia, Honor na ụdị ndị ọzọ.
Ugbu a, ekele maka mkpokọta nke ọnụ ụzọ German Nkechi, mgbe ahụ anyị na-egosi gị smartphones niile ekwenyela iji nweta gam akporo 10 na ndị ọzọ ga-enwerịrị ike. Buru n'uche na enwere ike ịgbasa ndepụta a karịa oge.
1 Gam akporo Q ga-abia na mobiles ndi a:
Gam akporo Q ga-abia na mobiles ndi a:
Pixel 3 (dị na beta)
Pixel 3 XL (dị na beta)
Pixel 2 (dị na beta)
Pixel 2 XL (dị na beta)
Pixel (dị na beta)
Pixel XL (dị na beta)
Xiaomi Mi 9 (dị na beta)
Xiaomi My Mix 3 5G (dị na beta)
Redmi K20 Pro (dị na beta)
Ihe nyocha Xiaomi Mi 8
Ihe ngosi RedN 7
Ihe ngosi RedN 7 Pro
Huawei Nwunye 20 X 5G
Na-asọpụrụ 20 Lite
Na-asọpụrụ 10 Lite
Samsung Galaxy Rịba ama 10 Plus
Samsung A9 AX
Samsung A30 AX
Samsung A20 AX
Nokia 8.1 (dị na beta)
Nokia 9 Dị Ọcha
Moto Otu Action
Motorola Otu ọhụụ
Moto G7 Ike
OnePlus 7 Pro (dị na beta)
OnePlus 7 (dị na beta)
OnePlus 6T (dị na beta)
OnePlus 6 (dị na beta)
Vivo X27 (dị na beta)
Ana m ebi NEX S (dị na beta)
Vivo NEX A (dị na beta)
Sony Xperia Z3 (dị na beta)
Sony Xperia 10 gbakwunyere
ASUS Zenfone 5Z (dị na beta)
LG G8 (dị na beta)
OPPO Reno (dị na beta)
Ezigbo 3 Pro (dị na beta)
Ezigbo mkpa (dị na beta)
Tecno ebua 3 Pro (dị na beta)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị a niile bụ ekwentị, ruo ugbu a, nke ga-enweta gam akporo Q
Ichefuru na Mi A3, Mi A2 na Mi A2 Lite sitere na Xiaomi.
Zaghachi Antonio Li
Amaarala nke onye nhazi Redmi Rịba ama 8 ga-eji
iFixit kwụsịrị Samsung Galaxy Note10 + 5G na ndozi